တရုတ်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်တုန်ခါမှုမှိုမြှောက်စက်ကြံ့ခိုင်ရေးအားကစားပြန်လည်ထူထောင်ရေးယောဂအနှိပ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Hemeikaineng
လျှပ်စစ်တုန်ခါမှုအမြှုပ် Roller Fitness Sport Recovery ယောဂအနှိပ်
၎င်းသည်အားကစားအနှိပ်နှင့်ကြွက်သားပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက်ပြင်းထန်သောတုန်ခါမှုမြှုပ်စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တုန်ခါမှုကုထုံး (VT) သည်ခွန်အားနှင့်စွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီးကြွက်သားအတွင်းသွေးစီးဆင်းမှုနှင့်ရွေ့လျားမှုအတိုင်းအတာ (ROM) ကိုတိုးစေပြီးနာကျင်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ သင်လိုအပ်သောပြင်းထန်မှုကိုအသုံးပြုရန်တုန်ခါမှုအဆင့်နှင့် mode ကိုအလွယ်တကူရွေးချယ်နိုင်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားသမားများ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးဝါသနာရှင်များစသည်တို့အတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောစွမ်းရည်မြင့်ဘက်ထရီနှင့်လျင်မြန်စွာအားသွင်းသည်။
ထုတ်ကုန်အမည် တုန်ခါမှုမြှုပ် roller
ဗို့အား / လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်သည် DC က 5V 2.0A
အချိန်အားသွင်းသည် ၃ နာရီလောက်
ဘက္ထရီသက်တမ်း 5-8 နာရီ
တုန်ခါမှုအဆင့် ၄ ဆင့်
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား 91 * 91 * 318 မီလီမီတာ
အသားတင်အလေးချိန် 840 ဂရမ်
၁။ Dynamic texture - ထူးခြားသောပုံစံပရောဂျက်သည်သင့်အားလက်ချောင်းထိပ်များနှင့်ဖိလိုက်သကဲ့သို့ခံစားစေသည့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောလှုံ့ဆော်မှုကိုပေးသည်။
၂။ ပြင်းထန်သောတုန်ခါမှု - လှိုင်းပုံစံ ၂ ခုနှင့်ကွဲပြားသောတုန်ခါမှုအမြန်နှုန်း ၄ ခုနှင့်သင့်အတွက်အလုပ်လုပ်သောအမြန်နှုန်းနှင့်ပြင်းထန်မှုကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
၃။ လွယ်ကူသောဘက်ထရီအားသွင်းခြင်း။ Micro USB အစားဘက်ထရီအားသွင်းခြင်းသည်ငါတို့အတွက်အသုံးပြုရန်ပိုမိုအဆင်ပြေပြီး ၃ နာရီခန့်အားသွင်းနိုင်သည်။
၄။ ဘက်ထရီသက်တမ်း - ၅၀၀၀ mAh စွမ်းရည်မြင့်ဘက်ထရီ၊ ပြည့်စုံသောဘက်ထရီသက်တမ်း ၄ နာရီရှိပြီးတစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်သာအားသွင်းရန်လိုအပ်သည်။
၅။ တာရှည်ခံ & ခံနိုင်ရည် - အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောကြောင့်ထပ်ခါထပ်ခါအသုံးပြုခြင်းမှပျက်ဆီးခြင်းသို့မဟုတ်ပုံသဏ္loseာန်ပျက်ခြင်း၊ အနည်းဆုံး ၁၅၀ ကီလိုဂရမ် (၃၃၀ ပေါင်) အထိခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
2. ထုတ်ကုန်များသည် CE၊ FCC၊ ISO အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုကျော်လွန်ပြီးဖြစ်သည်။
ရှေ့သို့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုလူကြီးများအတွက်ဆေးရုံအတွက်အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှု 10L
နောက်တစ်ခု: UV100 အိတ်ဆောင် Mini Handheld အသေးစား LED UVC အလင်းအိမ် UV Sterilizer Wand
အသစ် Coronavirus (COVID-19) Antibody IgM, IgG T ...
Disposable Nitrile စက်မှုအဆင့်လက်အိတ်များ
မျက်လုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပိတ်ဆို့သော anti-fog Safety ...